Amanzi amanzi afana noLwandle lwamanzi olutyulo
Kutheni Abantu Abaninzi Banyelwa Ngamanzi Aselungileyo Kunamanzi aTyuwa
Ukugalelwa kwamanzi ahlambulukileyo kuyahluke ekugwilweni kwamanzi anetyuwa. Enyanisweni, abantu abaninzi banamanzi amanzi kunamanzi atyuwa. Phantse i-90% yamanzi amanzi ayenzeka kumanzi amanzi, afana namachibi okubhukuda, iibhafu zokuhlamba kunye nemifula. Oku kungenxa yechemistry yamanzi kunye nendlela ehambelana ngayo ne- osmosis . Nantsi indlela esebenza ngayo.
Ukutywa kwamanzi eTyuwa
Ukugcoba kukubandakanya ukuxubha xa uhlala emanzini. Awudingi ukuba uphefumle emanzini ukuze kwenzeke oku, kodwa ukuba utyumba amanzi anetyuwa, ukuxinwa kwetyuwa ephezulu kukuvimbela amanzi ukuba angene emathangeni amaphaphu.
Ukuba ugonywa ngamanzi etyuwa, ngokuqhelekileyo kuba awukwazi ukufumana i- oxygen okanye ukukhupha i-carbon dioxide. Ukuphefumula ngamanzi anetyuwa kuthatha isithintelo somqobo phakathi komoya nemiphunga yakho. Ukuba amanzi esetyuwa isuswa, unokuphefumula kwakhona.
Nangona kunjalo, oko akuthethi ukuba akukho miphumo emibi. Amanzi okunyuwa ngamanzi atyuwa yi-hypertonic kwi-cell i-cell kwiimfestile zamaphaphu, ngoko amanzi okuphuma egazini lakho angene emiphakeni yakho ukuze ahlawule umlinganiselo woxinzelelo. Igazi lakho liyancipha, ubeka ingxaki kwinkqubo yakho yokujikeleza . Uxinzelelo entliziyweni yakho kunokukhokelela ekubanjweni kwenyama ngaphakathi kwemizuzu eyi-8 ukuya kwe-10. Iindaba ezilungileyo kukuba, kulula ukuba uphinde uphumelele igazi lakho ngokusela amanzi, ngoko ke ukuba usinda kwimeko yokuqala, uye kakuhle endleleni yokubuyisela.
Ukugwinywa kwamanzi aManzi
Unokufa ngokuphefumla amanzi aphelileyo emva kweeyure emva kokuba ugweme ukumanzela kuwo! Oku kungenxa yokuba amanzi amancinci "ahlambulule" ngokubhekiselele kwiimfono kunomsila ngaphakathi kwiseli yamaphaphu.
Amanzi amancinci ayangena emanqeni ekhanda ngenxa yokuba i-keratin ayinakunqanda amanzi, kodwa amanzi ahlaselwa kumaseli amaphaphu angakhuselekanga ukuze azame ukulinganisa i-gradient yoluntu kwi-membranes yeseli. Oku kungenza umonakalo omkhulu wamathambo, ngoko ke nangona amanzi esuswa emiphakeni yakho, kukho ithuba onokuthi ungabuyi.
Nakhu okwenzekayo: Amanzi amnandi yi-hypotonic xa kuthelekiswa nemisipha yomphunga. Xa amanzi angena kwiiseli, ziyabavulela. Amanye amaseli emiphunga angaphuma. Ngenxa yokuba i-capillari emipompheni yakho ibonakaliswe kumanzi amanzi, amanzi angena kwigazi. Oku kunciphisa igazi lakho. Iiseli zegazi zaqhambuka ( hemolysis ). Iphakamileyo ye-plasma K + (ions i-potassium) kunye ne-Na + ecindezelekileyo (amanqanaba e-sodium) angaphazamisa intliziyo yomsebenzi wenhliziyo, ebangela i-fibrillation ye-ventricular. Ukubanjelwa kweenqwelo ezinqwelwe kwi-cardiac ukususela ngokungalingani kwe-ion kungenzeka kwimizuzu engama-2 ukuya kwemi-3.
Nangona usinda kwiimitha ezimbalwa zokuqala, ukungaphumeleli kwe-renal ephawulekayo kunokuvela kwiinkomfa ze-hemoglobin kwiiseli zegazi ezigqithisiweyo ezintso zakho. Ukuba ugonywa ngamanzi amnandi ashushu, ukutshintsha kweqondo lokushisa njengoko amanzi abanda abanda abangena egazini lakho, unokusongela intliziyo yakho ngokwaneleyo ukuba kubanjwe i-cardiac kwi-hypothermia. Ngakolunye uhlangothi, ngamanzi etyuwa, amanzi abandayo awangena kwigazi lakho, ngoko imiphumo yeqondo lokushisa ixhomekeke ekulahlekeni kwishisa kwesikhumba sakho.
Umninimzi weKhemikhali wenza ntoni?
Imibuzo yokuVavanya iMvavanyo - Ukufunda i-Meniscus
IChimistry Pickup Lines
Kutheni i-Graphene ibalulekile?
Ukuguqula ii-Cubic intshi ukuya kwiLitha
Ngaba iRadioactiveactive Heavy Wateractive?
I-Discus yamadoda iphosa ukuqhubela phambili kwiRekhodi yehlabathi
Igama likaMongameli Iintsingiselo kunye neMvelaphi
I-Anime Anime Yabanikela kunye neMemes yePinterest, iTumblr, Facebook kunye ne-Twitter
I-Biography kaMarion Mahony Griffin
I-Perl Array Pop () Umsebenzi
Amanye amagama kaMtyholi kunye neemidemon zakhe
I-Tetracolon I-Climax (Izitayela zeRhetoric kunye neSigwebo)
Yiyiphi i-Hypothesis ebomvu?
I-Heterozygous: Inkcazo ye-Genetics
I-12 Imam: I-Mahdi ne-Iran namhlanje
Amadoda eHarlem Renaissance
I-Abstract Expressionism: I-History History ye-101
'Plat's' Euthyphro '
Iimfuyo ezigqithiseleyo zike zahamba ngeLeash
Imbali ye-Oreo Cookie